Binarium: အကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းများ၏သတင်းနှင့် update ကို
အဓိက > binary Options ကိုသတင်း > Binarium: အကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းများ၏သတင်းနှင့် update ကို
03.06.2016 ·0· အဆိုပါအဘို့အားလုံးသော posts ဇွန်လ 2016
အတော်လေးမကြာသေးမီက, Binarium ယင်း၏ပစ္စုပ္ပန်နှင့်အနာဂတ်ကုန်သည်များအပြောင်းအလဲများနှင့်မွမ်းမံမှုများအားဖြင့်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။
ပွဲစားပေမယ့်ဝမ်းမမြောက်နိုင်သည့်စစ်ဆင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေး, ပြသထားတယ်။ နှစ်ပေါင်းများစွာအဘို့, Binarium ဘဏ္ဍာရေးကမ်ဘာပျေါတှငျကြားနာမှာကုမ္ပဏီ-Level အီးယူ-အမေရိကန်အပြိုင်အဆိုင်ပွဲစားများ၏ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အဆောက်အဦးများအဖြစ်, အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုသို့ဖွယ်ရှိသည် Binarium ကုန်သည်များ CIS နှင့်ရုရှားသာမကသူတို့ရဲ့လုပ်အား၏အသီးအပွပျော်မွေ့နိုင်ခဲ့ကြတယ်ရန်၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏အရေအတွက်ကိုတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်။ အလွန်ခြီးမှမျး, ပွဲစားအမြဲအချိန်နှင့်သမာဓိစမ်းသပ်မလွန်ပါဘူး, Binariumu ဂုဏ်သိက္ခာနဲ့သူ့ရဲ့လမ်းကိုကျော်လွှားရန်စီမံခန့်ခွဲ။
ကုမ္ပဏီ၏အသစ်က်ဘ်ဆိုက်လတ်ဆတ်နှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ထိရောက်မှုပလက်ဖောင်းစောင့်မတော်မူ၏။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သင်ယူမှုနှင့်ကုန်သွယ်များအတွက်သာယာသောပိုမိုအဆင်ပြေအခြေအနေများကနေ။
အခုတော့ကုမ္ပဏီ၏ဖောက်သည်များမှာလည်းတစ်လတစ်ကြိမ်2တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးကုန်သွယ်မဟာဗျူဟာများနှင့်စျေးကွက်ဆန်းစစ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတတ်နိုင်သမျှလုပ်နေကြသည်။
ဘယ်ကံကောင်းထောက်မစွာပြောင်းလဲမှုများမထိခိုက်ခဲ့ပါဘူးအသေးဆုံးသိုက် $9၏တန်ဖိုး, နှင့် $ 1 အတွက်နိမ့်ဆုံးလောင်းကြေးဖြစ်ပါတယ်။
[အချက်ပေးအမျိုးအစား = »အောင်မြင်မှု»]
တစ်မိနစ်လျှင် Binarium အတွက်နိမိတ်လက္ခဏာ
အမျိုးအစားများ Binarium အကောင့်အသစ်များ၏
အတော်များများကကုန်သည်များအပြုသဘောသည်ပွဲစားရဲ့ကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းအကြောင်းကိုဟောပြောလော့။ ယင်း၏ရိုးရှင်း, လုပ်ဆောင်ချက်ကိုဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ပျောက်ဆုံး tools များရှိနေသော်လည်း။ တစ်ဦးရဲ့အားသာချက်အဖြစ်ပိုင်ဆိုင်မှုတစ်ဦးကကျယ်ပြန့် Binarium.
သင့်အနေဖြင့်အောက်ပါ binary options များကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းကိုဝယ်နိုင်သည်
ပလက်ဖောင်းကုန်သွယ်ထိရောက်မှုမြှင့်တင်ရန်ရရှိနိုင်ခြင်းနှင့်စျေးဝယ် features တွေဖြစ်ပါတယ်။ အောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကောင်းဆုံးစဉ်းစားပါ:
ထို option ၏သက်တမ်း extension ။ အရာအားလုံးဒါရှင်းရှင်းလင်းလင်းနာမတော်အားဖြင့်, ထို function ကိုသက်တမ်းကုန်ဆုံးတိုးပွားလာပါဝင်သည်သို့မဟုတ်ရှေ့ဆက် (အနာဂတ်၌) ကိုအချိန်ကလွှဲပြောင်း။
Double ။ ဤဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူ, သငျသညျတခုတူညီငွေပေးငွေယူဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ ဒုတိယငွေပေးငွေယူတူညီတဲ့အမြင်, သက်တမ်းကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်အတူဖွင့်လှစ်ခဲ့ပေမယ့်ချက်ချင်းဖွင့်လှစ်သည့်အချိန်တွင်ပလက်ဖောင်းမှာစျေးနှုန်းမှာလက်ရှိအချိန်ဖြစ်ပါတယ်။
ရောင်းရန် option ကို။ သငျသညျမမှန်ကန်ကြောင်း, သင့်အလားအလာ, ကံမကောင်းစွာလွှင့်ဖို့သဘောပေါက်လျှင်ဤ function ကိုပိုက်ဆံကယ်တင်နိုင်ပါ။ သင်ကပြန်ပွဲစားမှ option ကို, ဒါပေမယ့်သူ့ရဲ့အသစ်များကိုစျေးနှုန်းရောင်းဖို့အခွင့်အလမ်းရှိသည်။ သငျသညျမြျှောလငျ့နိုငျလျော်ကြေးပမာဏကို သာ. , ဖွင့်လှစ်မှာစျေးနှုန်းမှစာရေးများ၏တန်ဖိုးပိုမိုနီးကပ်စွာ။
အဆိုပါနှေးကွေးနေသေးတယ်မှတ်ပုံတင်ပုံစံများကိုမေ့လျော့! အခုတော့မှတ်ပုံတင်ပလက်ဖောင်း Binarium အမှန်တကယ်ကမိနစ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။ မှန်းဆကုန်သွယ်၏စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဤလောကသို့နှစ်မြှုပ်ခြင်းအားဖြင့်သင်ရုံ3step ခွဲခြား: ရုံဝင်, ရွေးချယ်မှုများဝယ်ယူ start xtoby
မှန်ကန်သော email လိပ်စာ
ကုန်သွယ်အကောင့် Binarium ချက်ချင်းနီးပါးစည်ပင်, ရန်ပုံငွေများရုပ်သိမ်းပေးရန်, သင်လုပ်နိုင်သည်ဒီတော့အစာရှောင်ခြင်းမဟုတ်။ အဆိုပါကုန်သွယ်အကောင့်ပေါ် မူတည်. သင်35 ရက်ပေါင်းမတိုင်ခင်ပြီးခဲ့သည့်နာရီကနေအထွက်ကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။
သိုက် Replenish သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောငွေပေးချေမှုစနစ်များမှတဆင့်ပြီးသားဖြစ်နိုင်သမျှအကျိုးအမြတ်ထုတ်ယူ: Master Card, webmoney, ဗီဇာ, Beeline, UnionPay, Sberbank အွန်လိုင်း, Yandex ပိုက်ဆံ, Megafon, Bitcoin, Qiwi, MTS, neteller ။
မဆို start-up မြို့တော်နှင့်အတူကုန်သည်ကြီးများတစ်ဦးကုန်သွယ်အကောင့်ဖွင့်ကောက်နှင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုသုံးစွဲဖို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ သငျသညျအသီးအသီးအကောင့်အတွက်လိုအပ်သည့်ကုန်သွယ်မြို့တော်၏ပမာဏအဖြစ်တစ်ဦးချင်းစီအမျိုးအစားအကောင့်ပိုင်ရှင်မှလောကအတွက်သောအခွင့်ထူးတွေ့မြင်နိုင်သည်အောက်တွင်:
ပလက်ဖောင်းပေါ် Register ယခုသင်တစ်ဦးသိုက်အကောင့်ပေါ်မှာဆုကြေးငွေကိုကမ်းလှမ်းလိမ့်မည်ရုံမိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်ပထမဦးဆုံးအပ်ငွေ replenishment ပြီးနောက်အချိန်အနည်းငယ်ရရှိထားပါသည်။ တစ်သာယာသောအံ့အားသင့်သဘောတူသည်။ ဆုကြေးငွေကုမ္ပဏီ Binarium ကိုယ့်ကျင့်သုံးခြင်းနှင့်အလွယ်တကူဖော်ပြပေး။
-torguyte နှင့်အတူသစ်တစ်ခုဈေးကွက်ထဲမှာဝင်ငွေကိုစတင်ရန် Binarium!
binary options များ 60 စက္ကန့်များအတွက်မဟာဗျူဟာ Pro ကို-Invest
ကော်လံကနေပိုများသော posts များ "Binary Options ကိုသတင်း"
အရင်းရှင် Binomo ပွဲစားများ၏အရေးယူ
အရင်းရှင်ပွဲစား BinomoRate ၏အရေးယူဆောင်ရွက်မှု ...
အခမဲ့ Binary ရွေးချယ်စရာယခုအဖြစ်မှန်ဖြစ်ပါသည်
အခမဲ့ Binary Options ကိုယခု ...
အိုင်ကျူ Option ကိုကနေအရေးယူနိုဝင်ဘာလ 2014
အိုင်ကျူ OptionRate ကနေအရေးယူနိုဝင်ဘာလ 2014 ဒီ post ...
binary options များအဘို့မိမိတို့ရေပန်းစားပလက်ဖောင်းများထဲမှနောက်ဆုံးရေးသားချိန်
အဆိုပါ binary options များသြဂုတ်လ 17 2017 နှစ်ပေါင်းအပေါ်သတင်းအပေါ်ထရေးဒင်း